Waddooyin ka mid ah magaalada Muqdisho oo saakay xira+Sabab? | Waddooyin ka mid ah magaalada Muqdisho oo saakay xira+Sabab? | Hal Sheegaha La Hubo
Waddooyin ka mid ah magaalada Muqdisho oo saakay xira+Sabab?
Ciidanka anmiga ayaa saaka xiray Qaar ka mid ah Waddooyinka Muqdisho ayaa saaka xiran, iyadoo lagu wado in maanta magaalada uu ka furmo shirka Golaha Amniga Qaranka oo u dhaxeeya Madaxda dowladda Federaalka, maamul goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Inta badan Isgoysyada Wadada Maka Al-Mukarama ayaa saaka xiran, iyadoo gaadiidka aan loo ogoleyn, sidoo kale wadada Wadnaha ayaa loo ogoleyn inay gaadiidka uga soo gudbaan dhinaca Wadada Maka Al-Mukarama, waxaana loo ogolaa dadweynaha.
Meelaha qaar ayaa la arkayay, iyadoo dadweynaha ay lugeynayaan, iyadoo ciidamada ammaanka ay ku sugnaayeen waddooyinka dhinacyadeeda.
Todobaadyadii u dambeeyay ayaa waxaa isa soo tarayay xirnaanshaha waddooyinka magaalada Muqdisho oo dadweynaha ay dhib badan ku qabeen.
Muddo sanad ayaa ka soo wareegatay doorashadii Madaxweynaha oo Madaxeyne Farmaajo ku guuleystay, waxaana dad badan xusuustaan khudbadii uu jeediyay xilligii musharaxnimadiisa oo uu ku balan-qaaday in aanay jiri doonin waddooyin la xiro, waxaana tan iyo markii uu xilka la wareegayay sii kordhayay xirnaanshaha waddooyinka, illaa heer la xiro jid cadayaasha xaafadaha.
– Advertisement – Waddooyin ka mid ah magaalada Muqdisho oo saaka xiran iyo ciidamo la soo dhoobay
Ciidamada ammaanka ayaa saaka xiray Qaar ka mid ah Waddooyinka Muqdisho ayaa saaka xiran, iyadoo lagu wado in maanta magaalada uu ka furmo shirka Golaha Amniga Qaranka oo u dhaxeeya Madaxda dowladda Federaalka, maamul goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.